Rosa na Ernesto, ndị ọrụ ụbọchị ga-enyere gị aka n'ugbo gị na Hay Day | Gam akporosis
Hay Day emelitere site na ndị ọrụ ụbọchị Rosa na Ernesto ndị ga-enyere gị aka n'ugbo gị
Supercell ga-enwe egwuregwu ole na ole na Playlọ Ahịa Google, mana ọ nwere ike idebe ha emelitere maka ju afọ nde ndị egwuregwu ndị na-eche banyere ha kwa ụbọchị. Otu n'ime ha bụ Hay Day, onye na-arụ ọrụ ugbo na afọ ndụ ya enweela ike ịghọ otu n'ime ndị simulators nwere ọdịnaya dị na thelọ Ahịa Google. Mmelite ndị kachasị ewu ewu gafere ahịrị ndị a iji gwa gị nkọwa ndị kachasị adọrọ mmasị na ha. N'oge okpomọkụ a gara aga, emelitere ya na azụmahịa maka mpaghara nke ahụ na-ekwe ka nke ahụ n’etiti ndị agbata obi mejupụtara mpaghara ndị ọrụ ugbo ahụ, ịnwere ike ịgbanwe ngwaahịa niile nri ubi gị na-emepụta.
Nyaahụ ka emelitere site na nnukwu ihe ọhụụ: ndị ọrụ ụbọchị. Rosa na Ernesto bịara inyere gị aka ka ewe go ha ọrụ ma si otú a lekọta otu ọrụ kachasị egwu nke Hay Day, ịbụ na-anakọta ngwaahịa kachasị mkpa nke egwuregwu na nke ahụ bụ isi iji mepụta pizzas ahụ, achịcha na ụdị desserts niile ị nwere ike iji zụọ ahịa na obodo ma ọ bụ na agbata obi ahụ na-atụ anya ngwaahịa na-atọ ụtọ kachasị mma. Ha abụọ ga-ahụ maka inyere gị aka na ọrụ ndị ahụ mgbe ị na-anọghị, yabụ ị nwere ike mepụtawanye ma ka mma nke mere na, mgbe ị laghachiri, ị ga-enwe ihe niile dị njikere ịzụ ahịa wee nweta ego ahụ ịchọrọ ịzụta karịa ngwongwo ma kwalite gị ugbo.
1 Ndị ọrụ ụbọchị abụọ na-arụsi ọrụ ike: Rosa na Ernesto
2 Akụkụ ndị ọzọ nke mmelite
Ndị ọrụ ụbọchị abụọ na-arụsi ọrụ ike: Rosa na Ernesto
Maka obere ego, ugbu a ruo otu izu, ị ga-enweta ha n'efu, Rosa na Ernesto ga-enwe ike ilekọta ọrụ ndị kacha mkpa ụbọchị Hay Hay. Ọ bụ ezie na Rosa ga-elekọta zụọ anụ ụlọ gị ma chịkọta ngwaahịa ha Mgbe ha dị njikere, dịka anụ ezi ahụ ma ọ bụ akwa, Ernesto ga-ahụ maka ịrụ ọrụ na mmiri ara ehi na ụlọ ọrụ shuga. Ha abụọ ga-enwe ebe nchekwa ha maka ngwaahịa ha na-anakọta, yabụ ha na-abịa iji chekwaa obere ohere na ugbo.
Ha nwere ulo nke ha n’elu ulo oru ugbo ma inwere ike inweta ha abuo site na ịpị ya. Rosa na Ernesto ga-apụta maka ịhọrọ otu n’ime ha abụọ. Ga-enwe ndepụta nke ngwaahịa ị nwere ike ịjụ ha ka ha lekọta usoro ha anya. Rosa ga-elekọta iji ihe a kụrụ na silo gị iji mee nri na grinder, ga-azụ ụmụ anụmanụ nri ma chịkọta ngwaahịa. N'aka nke ọzọ, Ernesto ga - eji ihe ndị si na silo ma ọ bụ ọba (okpete shuga, mmiri ara ehi ma ọ bụ nke ewu) mee ihe, were ha gaa igwe nrụpụta wee kpokọta ngwaahịa ndị e kere.
Site na nke a, ị ga-anwa idebe ihe ubi zuru oke na silo gị, ebe ndị ọrụ ụbọchị agaghị akụ ma ọ bụ iwe ihe ubi ma ha ga-akwụsị ịmị mkpụrụ ma ọ bụrụ na ha ejedebe ihe ha ji arụ ọrụ. Ọnụ ọgụgụ nke ngwaahịa ị nwere ike ịtụ dabere na ọkwa gị. Na Akara ngosi na windo iji Ha ga-agbanwe site na nke na-egosi na emepụtararịrị ngwaahịa ahụ, akara ngosi na-acha anụnụ anụnụ na-egosi na a na-eweghachi ya na nke na-acha uhie uhie na-egosi na enwere nsogbu nrụpụta nke metụtara enweghị nri zuru oke. Eziokwu ọzọ na-adọrọ mmasị bụ na ndepụta anaghị eri oke na nchekwa Rosa.
Akụkụ ndị ọzọ nke mmelite
A tinyekwara ihe mgbakwunye dị iche iche dịka ihe ịchọ mma pụrụ iche na ego nrite derby; ihe a na-enye osisi ahụ, nke gụnyere iwepụ osisi ndị kpọnwụrụ akpọnwụ na ahịhịa iji gbanwere ya ole na ole daịamọnd; na a pụrụ iche nke ọma, Ọ bụrụ na ị na-egwu Hay Day karịa afọ 2 ị ga-enweta onyinye nke mere na onye ọ bụla batara na-ahụ na ị bụ ọkachamara ọkpụkpọ na egwuregwu vidio ahụ.
Mmelite na-adọrọ mmasị nke na-abịa nyere aka na ọrụ ndị ọzọ dị mkpa na na ọtụtụ n'ime anyị nwere mgbe niile nwere olileanya na ha nwere ike na-akpaghị aka. Ndị ọrụ ụbọchị abịala maka ya, yabụ na amaghị m ihe ị na-eche iji melite Hay Day iji aka ha na nnukwu ọrụ ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Hay Day emelitere site na ndị ọrụ ụbọchị Rosa na Ernesto ndị ga-enyere gị aka n'ugbo gị
Anara m ọrụ derby nke inye anụmanụ nri, ebe m na-enyeghị ha nri, n'ihi na onye ọrụ ahụ na-eme ya, ọ naghị agụta derby ahụ, ọ na-agbakwa ngwa ngwa na-eme ya, gịnị ka m ga-eme?
Ọ bụrụ na achọghịzi m maka ọrụ ndị ọrụ ụbọchị, gịnị ka m ga-eme? M na-achọsi ike, enwere m ụda nke m, ugbu a ha na-emebi ihe niile
Lenovo Phab2 Pro bụ eziokwu ugbu a, ọ dị maka ịzụta ma ya na ngwa 35 Tango
[APK] Ọhụrụ alfa Twitter na-eweta ụzọ mkpirisi, ọtụtụ windo maka Nougat na akara ngosi gburugburu